प्रहरी हिंसा: 13 मानव प्रहरीले टिलबर्गलाई निषेधित गरेको छ किनकी उसले आफ्नो स्यान्डविच छोड्न चाहँदैन मार्टिन भिजल्याण्ड
घर » सामान्य » प्रहरी हिंसा: 13 मानव प्रहरीले टिलबर्गलाई निषेधित गरेको छ किनकी उसले आफ्नो स्यान्डविच छोड्न चाहँदैन
प्रहरी हिंसा: 13 मानव प्रहरीले टिलबर्गलाई निषेधित गरेको छ किनकी उसले आफ्नो स्यान्डविच छोड्न चाहँदैन
जनवरी 19 मा पोस्ट गरियो, 2017 भित्र सामान्य |
चेतावनी: एक संख्यात्मक मानको सामना भयो /home/martinvrijland/public_html/archive/wp-content/plugins/social-warfare/funitions/social-networks/twitter.php लाइन मा 106
चेतावनी: एक संख्यात्मक मानको सामना भयो /home/martinvrijland/public_html/archive/wp-content/plugins/social-warfare/funitions/social-networks/facebook.php लाइन मा 74
यो पुलिस हिंसा संग crazier प्राप्त गर्दैछ। टििलबर्गमा एक केटाले आफ्नो स्यान्डविच बसमा खाना खान चाहन्छ, तर बस चालकले सोचेको छ कि यो यो मनपर्दैन। बस चालकले अन्तमा ड्राइभ गर्छ किनकि सँगी यात्रुहरू शिकायत गर्दैछन्। अर्को स्टपमा, तथापि, त्यो केहि एजेन्टहरूले बसबाट बस लिइयो। अन्ततः 13 प्रहरीले 25 वर्षका केटाकेटीलाई क्रक गर्न प्रयोग गरिन्छ। एक साथी साथी योनी Klarenbeek को सबै फिलिमहरु को नाम ले र उनको फेसबुक टाइमलाइन मा रिपोर्ट गर्दछ। तिनी लेख्छन् [उद्धरण] अनावश्यक पुलिस क्रूरताबारे कुरा गर्नुहोस्। केटाले स्यान्डविचलाई बेवास्ता गर्न चाहँदैनन्, केटाले बसमा बाहिर खाएन, केही गलत छैन। डराएको डरले केही पनि खतरा छैन .. बस चालकले पुलिसलाई फोन गर्छ र 13 मानिससँग देखाउँछन् !! ब्वाइज रिसाइज र ठूलो पन्च हुन्छ ... बिल्कुल हास्यास्पद छ कि पुलिस कसरी यहाँ प्रदर्शन गर्दछ, पुरा तरिकाले अनावश्यक ... शर्मिंदा .. म त्यहाँ देखि थियो, र उनले आफ्नो स्यान्डविच राख्न चाहँदैनन्। बस चालक भन्छन् कि म आफ्नो स्यान्डविच राख्नु अघि म ड्राइभ गर्नुहुन्न। त्यसैले बस चालकले एनएनएनएक्स मिनेटको पर्खाइमा पर्खनुसम्मसम्म अन्ततः ड्राइभ गर्दछ किनभने बाकी मानिसहरू बस चलाउन बसमा गए। त्यसपछि उनले पुलिसलाई बोलाएकी थिइन किनभने उनी "सुरक्षित छैन"। त्यो सबै छ। र म पानहरूसँग धम्की वा दुर्व्यवहारको अर्थ छैन। डाक्टरको साथ "सुरक्षित" महसुस गर्न केहि पनि थिएन।
तल तपाईले प्रहरीको कटाईको भिडियोको एक भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। बाँकी ...
सबै शेयरहरू 0
realfraggy / जनवरी 19, 2017
सुरक्षित र सेवा गर्नुहोस्! Tazers आउँदै हुनुहुन्छ (वास्तवमा त्यहाँ) र भविष्यमा मैले पूर्णतया स्वचालित सशस्त्र विमानहरूको तैनाती गर्ने प्रयास गरेँ। ROBOCOP को पहिलो संस्करण अझै पनि विज्ञान कथा, FUTURE को बारे मा एक फिलिम थियो। रोबोटको रीमेक अब विज्ञान कथा होइन, यो भविष्यको बारेमा चलचित्र हो, तर अब के NOW खेलिरहेको छ। यदि तपाई आफ्नो नगर पालिकाबाट अनुमति अनुरोध गर्न4हप्ताहरू चाहानुहुन्छ भने ब्यूँझनुहोस्, र त्यसपछि HOW मा निर्देशनहरू संग एक पुस्तिका प्राप्त गर्नुहोस् र जब तपाईं पार्ट र कार्यक्रममा कुनै पनि जुर्माना गर्न सक्नुहुनेछ वा हुन सक्नुहुन्न। गंधको स्तर7भन्दा माथि ... माथि उठ्नु !!!!